Horonan-tsary Sosialy 2013 | Martech Zone
Alarobia, Novambra 7, 2012 Alarobia, Novambra 7, 2012 Douglas Karr
Niverina i Erik niaraka tamin'ny fizarana farany (faha-4) farany ny horonantsary sary nataony tamina media sosialy. Raha mandinika tsara ianao, ny dikanteny tsirairay avy amin'ny horonan-tsary dia manao asa tsy mampino amin'ny fampisehoana ny fiovana izay nanaparitaka an'izao tontolo izao an'izao tontolo izao. Na ny parodies dia mahafinaritra.
Ampitahao amin'ny tamin'ny taon-dasa Fiovan'ny haino aman-jery sosialy horonan-tsary ary ho hitanao ny antontan'isa maro kokoa mifandraika amin'ny fifandraisana tena izy, vola eo amin'ny marika sy ny mpanjifa.
Erik Qualman dia mpanoratra amerikanina Socialnomics, Mpitarika nomerika ary krizy. Izy koa dia mpandahateny lehibe iraisam-pirenena miresaka momba ny antony manosika Gen Y, fitarihana nomerika, media nomerika ary ny fironana amin'ny ho avy.
Tags: Hafanàm-po an haino aman-jeryerik Qualmanhoronantsary infographicLahatsary Marketingmedia vaovaoQualmanrevolisiona media sosialysocialnomicsby MediaWikisary infographic
8 Nov 2012 amin'ny 12:36 maraina
Matetika aho tsy mamela hevitra, saingy nieritreritra aho fa lahatsoratra tsara ity!